Otú nyefee kọntaktị site na iPhone ka Android na ị zụta? Nsogbu na iPhones bụ na Apple adịghị ekwe ka ị na-echekwa na kọntaktị na na kaadị SIM gị. Mgbe ihe mere ndị a nwere ike ịbụ na ọtụtụ ndị, gụnyere nche akụkụ (dị ka onye na-eji gị SIM nwere ike mfe ịnweta kọntaktị gị), ọ pụtara na usoro nke na-ebufe kọntaktị pụrụ ịghọ cumbersome.
Ọ bụrụ na ị na-ịmafe igwe si iPhone ka Android, i nwere ike na-eche otú nyefee iPhone kọntaktị na Android dị ka ma igwe eji kpamkpam dị iche iche os. E nwere atọ mfe ụzọ mee ka a nyefe na-enweghị usingiTunes, nke na-emekarị na-ewe ọtụtụ ụzọ na-na. Anyị ga-ele anya na ụzọ atọ nyefee kọntaktị site na iPhone ka Android igwe.
Part1: Nyefee Ndi ana-akpo si iPhone ka Android iji Email
Part2: Nyefee Ndi ana-akpo si iPhone ka Android iji iCloud
Part3: Nyefee Ndi ana-akpo si iPhone ka Android mfe na ngwa ngwa
Dị ka ị ga-eji Android, ọ preinstalled ngwa nke Gmail. Gmail na-enye gị oké ụzọ mekọrịta ị kọntaktị na-akpaghị aka ọhụrụ gị Android ekwentị. Otú ọ dị, ị ga-achọ niile kọntaktị gị n'ụdị vCards. Ọ bụghị na ike, iCloud na gị iPhone nwere ike na na ala. Lee ndị nzọụkwụ na-eso:
Step1: Abanye na gị iCloud site iPhone ma ọ bụ site na kọmputa. Gaa na kọntaktsị.
Step2: Ugbu a gaa na ala na pịa ntọala, ma họrọ niile.
Step3: Ugbu a gaa otu ntọala na ugbu a họrọ bupu Vcard.
Step4: Ugbu a faịlụ ga-ebudatara na kọmputa gị dị ka VCF faịlụ.
Step5: Ugbu a gaa gmail.com na-eji otu nzere gị iji na gị Android Gmail.
Step6: Pịa na Gmail n'elu n'akụkụ aka ekpe ma họrọ kọntaktị.
Step7: Site n'elu ị pụrụ ịhụ ihe button, pịa ya na site na dropdown ndepụta họrọ mbubata. Ịnyagharịa gị vcf faịlụ na na-azọpụta site iCloud.
Step8: Gmail na-akpaghị aka na-azọpụta ma syncs kọntaktị na ngwaọrụ site na iji otu Gmail akaụntụ.
Ka ị na-na-eji iPhone na n'oge gara aga, ị kọntaktị ga-kụziri na gị iCloud akaụntụ. I nwere ike ịzọpụta gị niile kọntaktị na Vcard format, nke nwere ike mfe kpọfere ọ bụla na ngwaọrụ ị chọrọ na ala. Soro n'okpuru nzọụkwụ nyefee gị kọntaktị site na iCloud.
Step1: Gaa iCloud.com si gị android ekwentị nchọgharị.
Step2: Ma ọ bụghị na họrọ kọntaktị otu otu ma ọ bụ họrọ niile si ntọala.
Step3: Ugbu a gaa ntọala na họrọ nhọrọ Export vCard. Ugbu a vcf faịlụ nwere niile kọntaktị gị ga-azọpụta na ekwentị gị.
Niile i nwere ime bụ ịnyagharịa ebe ebe vCard na-echekwa na dị nnọọ enweta na ya. All kọntaktị ga-azọpụta na gị android na ala. Ị chọrọ nwere ime ihe ọ bụla. I nwekwara ike iji ihe nhọrọ si na kọntaktị na mgbe ahụ ịnyagharịa vCard.
Wondershare MobileTrans Dị ukwuu software maka ebufe data n'etiti abụọ dị iche iche igwe. The software nwere ike mfe nyefee kọntaktị, foto, ederede ozi, video faịlụ, kalenda, na ndekọ na ọtụtụ ndị ọzọ na otu click usoro. Ebe a na-ya atụmatụ:
Ọ na-akwado iOS, Android, Microsoft, na Symbian. N'ozuzu, ọ na-arụ ọrụ karịa 3000 igwe.
Niile kwadoo ọdịnaya na-agafere na mbụ mma.
Ọ bụ narị percent enem dị ka ọ na-eji kọmputa gị dị ka ọkara.
Ọ na-awade ndị ọzọ na atụmatụ dị ka erasing data on ochie ntị, na-eweghachiri si dị iche iche ndabere na isi mmalite wdg
The interface bụ kensinammuo na usoro na-ewe nanị minit ole na ole.
Otú nyefee kọntaktị site na iPhone ka Android
Ị nwere ike ibudata software si wondershare saịtị. E nwere free version na zụọ version. N'ihi na kasị mma mma, zụrụ software. Iji mee ka nyefe ị ga-achọ kọmputa arụnyere na MobileTrans na USB cables nke ma igwe. Lee ndị na-eso nzọụkwụ
Step1: Mwepụta software na gị windows ma ọ bụ Mac pc.
Step2: Ugbu a họrọ-acha anụnụ anụnụ nhọrọ, nke bụ ekwentị na-ekwentị nyefe.
Step3: On ọzọ ihuenyo, ị ga-jikọọ gị ma igwe. Jide n'aka na ị na-eji eriri USB nke iche igwe na-eme ka njikọ ala.
Step4: Ọ ga-chọpụta ma igwe. Otu ihe unu na-eme n'aka na gị isi iyi ngwaọrụ bụ iPhone na ebe ngwaọrụ bụ android. Jiri dobe ala menu ịchọta ngwaọrụ.
Step5: Ugbu a gaa n'etiti panel na-eme ka n'aka na kọntaktị na-ticked na ọ ga-egosi na ọnụ ọgụgụ nke kọntaktsị na gị iPhone.
Step6: Ugbu a niile i nwere ime bụ pịa Malite Detuo. Nke a ga-amalite usoro na data ga-agafere. Oge iwere ga-adabere na ego nke data bufee.
Ruo mgbe nyefe na-okokụre, adịghị ichegbu igwe. Ozugbo usoro-agwụ agwụ, Ikwupu ma igwe na ego ị Android ngwaọrụ. All kọntaktị ga-abụ dị na ekwentị gị.
> Resource> Nyefee> 3 Easy Ụzọ Nyefee Ndi ana-akpo si iPhone ka Android ekwentị mkpanaaka na